Waallida midabka ee shaqooyinka sawirada Skwak iyo taxanahiisa cusub | Abuurista khadka tooska ah
Iyadoo ay u muuqan karto taas midabaynta rinjiyeynta way fududaan kartaa, waa mid ka mid ah astaamaha ugu qalafsan marka la dooranayo codadka aan dooneyno muuqaal ahaan, astaan ​​gaar ah ama naqshadeynta websaydhka oo ay tahay inay bixiso dareenka degganaanta ama degganaanta.
Jim Skwak farshaxankiisa ayaa ka buuxa midabyo muuqda, jilayaal rauus ah iyo tiro aad u tiro badan oo walxo noocyo kala duwan ka kooban oo ka kooban sawirro ay kugu habboon tahay inaad waqti fiican ku qaadatid si aad u hesho dhammaan waallidaas oo ku ciyaareysa codka indhahaaga. Hadda waxaad haysataa taxane cusub oo soo saari doona dareenka ugu yar.
Xitaa wuxuu ku raaxeystay isku dar kubbadda pokeball sawirka cinwaanka qoraalkan (ma dhihi doono meesha ay ku taal, a la Wally). Mid kasta oo ka mid ah shaqadiisu waa kuwo aad u kacsan oo muujinaya inaad u baahan tahay inaad wakhti fiican ku qaadato inaad isku daydo inaad hesho farriinta ama dulucdeeda.
Jim wuxuu soo saaray sawirro loogu talagalay noocyada waaweyn sida Microsoft, McDonalds, iyo khadkooda dharka ee loo yaqaan 'Sneakymob'. Hadda waa markii uu daabacay qaar ka mid ah shaqadiisa shaqsiyadeed kuwaas oo udub dhexaad u ah soo galintan.
Gabalkiisii ​​ugu dambeeyay, taariikhda ninka iyo awooda, wuxuu sawir qaataha hor dhigaa ficilada ninka awoodda galiyay. Waxaa laga heli karaa xilliyada ugu muhiimsan ee tallaabooyinka ugu horreeya ee aadanaha, illaa Donald Trump oo garaacaya Taallada Xorriyadda.
Shaqada fanaankan faransiiska ah ayaa ah xoog badan oo firfircoon, laakiin hubaal qof kastaa joojin maayo inuu ilaaliyo mid kasta oo ka mid ah curiyeyaasha ka kooban sawirradan gaarka ah.
Waan kaa tegayaa boggaaga taas oo aad ka heli karto shabakadaha bulshada ee kala duwan iyo qayb ka mid ah faylalka farshaxankiisa. Farshaxanka waallida midabka sida loogu yeeri karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Shaqooyinka midabada leh ee Skwak ee faahfaahinta weyn, waalli iyo hal-abuurka
Olly Moss iyo 7-dii dabool ee loogu talagalay Harry Potter eBooks